आफु भन्दा धनी केटी लभ पारेर बिहे गर्दा यस्तो भयो, छोरा बोकेर श्रीमान मिडियामा – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Video/आफु भन्दा धनी केटी लभ पारेर बिहे गर्दा यस्तो भयो, छोरा बोकेर श्रीमान मिडियामा
तपाईंको दाम्पत्य जीवन सुखमय छ । खुसीसाथ दुबैले दाम्पत्य जीवन भोग गरिरहनुभएको छ । एकआर्काको भावना बुझ्नुभएको छ । आपसी साथ र सहयोगबाट घर-व्यवहार चलाउनु भएको छ । सबै कुरा ठिकठाक छ । यस किसिमको सम्बन्ध कायम गर्न के कुरा चाहिएला ?
त्यसैले त, माया र विश्वास वैवाहिक जीवनसित अन्तरनिहित हुन्छन् । र, यी दुईको अभावमा वैवाहिक जीवन रमाइलो पनि हुँदैन । त्यसैले पनि जीवन जीउन तथा वैवाहिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन पनि प्रत्येक दम्पतीलाई माया र विश्वासको खाँचो पर्छ ।
यसका बाबबुद पनि श्रीमान वा श्रीमतीबीच विश्वास भएन भने ? एक अर्काप्रति शंका उत्पन्न भयो भने ?
विभिन्न अनुसन्धानहरुले जनाए अनुसार कसैमाथि शंका गर्नु खासै ठूलो समस्या हैन । तर कुनै भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको भने पहिलो खुड्किलो बन्न सक्छ । यस्ता शंकाको समयमै उपचार नगरेको खण्डमा यस प्रति मानिसको विश्वास बढ्न थाल्छ । जसले गर्दा आˆनै साथीप्रति अविश्वास पैदा हुनसक्छ ।
त्यसपछि त्यही अविश्वास तनाव तथा चिडचिडापनमा बदलिएर मनमा डर पैदा हुनसक्छ । कहिलेकाही यस किसिमको तनाव शारीरीक रुपमा पनि देखिने गर्छ । यसले एकातिर मानसिक समस्या पैदा गर्नुका साथै अर्कोतिर सम्बन्धमा समेत असर पार्छ ।
र शंका जोसुकैको मनमा पैदा हुनसक्छ । यसले लिङ्गभेद गर्दैन । जबकी हाम्रो समाजमा महिलाहरुलाई मात्र शकांलु नजरले हेरिने गर्छ । जबकी यर्थाथ यही हो कि पुरुषहरु पनि शंकालु हुुन्छन् । फरक यति हो कि महिलाहरुले शंका गरेको त देखिन्छ तर पुरुषहरुको देखिदैन । आखिर किन ? किन महिला तथा पुरुषहरुले एक अर्कालाई शंका गर्छन् ?
यसै क्रममा बन्धिपुरका एक युवक पोखरामा कामको सिलसिलामा पुगेका हुन्छन । सोहि क्रममा पोखराकै एक युवतीसङ उनको प्रेम बस्छ र बिवाह हुन्छ । बिवाह पछि उनीहरुको बिचमा खटपट भने नभएको होइन ।
बिवाह पछि उनले बच्चा जन्माउन किन नै पर्यो र भन्ने सम्मका कुरा हुन्थे । यदि बच्चा नै भएन भने पनि ठिकै छ भोलि सम्पति कमाइएछ भने पनि दाइ भाइको छोराछोरीले खालान सम्पति सम्मका कुरा हुन्थे । यसै क्रममा ५ बर्ष पछि छोराको जन्म भयो । परिवारमा खुसियाली छायो ।
परिवार खुसियालीका साथ चल्दै थियो तर अहिले यी दुवैको जिन्दगीमा कालो बादल छाएको छ । छोरालाई काख च्यापेर आफ्ना पीडाहरु सुनाउन मिडियासामु आएका छन् । आफु भन्दा धनि युवती संग बिवाह गर्दा यस्तो पिडा भोगेको उनि बताउछन बाँकि तलको भिडियोमा हेर्नुहोस :